Imithombo yeNtengiso yezeNtlalontle imalunga neNtlalo, hayi iMidiya Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 10, 2010 NgoMgqibelo, ngoJuni 27, 2015 Douglas Karr
Amaqonga eendaba ezentlalo zizixhobo. Amaqonga eendaba ezentlalo yisoftware. Kukho ezinye izixhobo kunye nesoftware phaya. Kuya kubakho izixhobo ezingcono kwikona.
I-Twitter ayinamsebenzi. I-Facebook ayinandaba. I-LinkedIn ayinamsebenzi. Iibhloko azinamsebenzi. Bonke basinceda nje ukuba sisondele kancinane kule nto siyifunayo.
Eyona nto siyifunayo yile iqiniso.
Eyona nto siyifunayo kukuba themba.
Eyona nto siyifunayo kukuba baqonde.
Eyona nto siyifunayo yile ubuhlobo.
Eyona nto siyifunayo yile Nceda.
Le nyanga yinyanga enkulu kakhulu komnye wabahlobo bam abalungileyo kwitekhnoloji. Uhambisa inkampani yakhe yemidiya yoluntu ukusuka eIndiana ukuya eCarlifonia. Uya kufakwa entliziyweni ye-Valley kunye nezinye iingqondo ezibukhali ezikhulise izicelo zabo zeendaba zoluntu ngokukhawuleza. (Ewe, ndinomona omncinci).
Isicelo esakhelwe liqela lakhe silula (kunjalo ke ngeTwitter!) Kodwa ingena entliziyweni yento abantu Ndifuna ngokwenene. Benza kube lula. Iqonga yindlela elula yokufikelela kwinxalenye yentlalo. Andijongeli phantsi italente engakholelekiyo kunye nomfanekiso ngqondweni owathathayo ukumilisela isicelo esipholileyo, akukho mathandabuzo. Kodwa ukuthandwa kungenxa yento enikwa sisicelo. Yenza ukubandakanyeka kwezentlalo esingakubonanga okwangoku.
Ndifundisa abathengi kunye nabathengi malunga netekhnoloji ukuze sikwazi ukuyinyusa ngokupheleleyo kwaye sandise ifuthe labo ekuhlaleni. Ke, xa abathengi bendibuza, "Ndizifumana njani ezinye [fakela abalandeli, abalandeli, ababhalisile, i-buzz, i-retweets], Ndihlala ndibekekile kancinci. Ukuba inkampani yakho ayisiyoyentlalo, ukuba awukhathalelanga abathengi bakho, ukuba awubhali mxholo umnandi, ukuba awunayo imveliso elungileyo, ukuba awunabantu abakhethekileyo, ukuba ' hayi ephawulekayo… Ke amanani amakhulu awasayi kukunceda nganto.
Ndihlala ndisitsho…. Imidiya yokuncokola sisiandisi. Ukuba awunanto yokuyikhulisa, okona kukhulisa kukhulu emhlabeni akunakunceda! Yeka ukukhangela iingcali zemithombo yeendaba ezinkulu nezingcono ukuze uqhubeke nokwakha izikhulisi ezinkulu nezingcono. Yile nto bayikhulisayo eyenza umahluko.
Ilingana nomntu ongakwaziyo ukucula ecela ukuba sigcwalise ibala lemidlalo. Emva kokugcwalisa ibala, emva koko yintoni? Ukuba awukwazi ukucula, sasingenalo ishishini lokuthengisa itikiti elinye! Iindwendwe ezinjengam zinokwenza abantu babonise ikhonsathi… ke ngumsebenzi wakho ukubeka umboniso!
Ke… yeka ukundicela ndikufunele ngakumbi xa ungakwazi ukuphatha ezi unazo ngoku. Ukuba abalandeli bakho abangama-500 abenzi shishini nawe, kuya kwenzeka njani ukuba ufumane abanye abangama-5,000 bezokuphucula iziphumo zakho? Nantsi ingcebiso… iya kukhokelela kwimpembelelo ephindwe kalishumi.
Amaxesha alishumi u-zero ngu-zero.
Ngenye imini i-Twitter ayizubalapha, i-Facebook ayizubalapha, i-LinkedIn ayizubakho apha ... kwaye sizakusebenza namajelo amatsha anokuqhubeka nokwenza izinto lula ngokulula. La maqonga amajelo eendaba amatsha akasayi kuba nakho ukulungisa imiba ephambili ecelomngeni kwisicwangciso sakho, nangona kunjalo. Masilungise ezo kuqala.
tags: Imidiya yokuncokolaSocial Media Marketing
Mar 10, 2010 ngo 1:06 PM
Njengoko ibinzana elithandwayo lisithi "Ukuba uyasilela ukucwangcisa, uceba ukusilela" Into endiyithethayo yile, awungekhe ube nempumelelo kwimidiya yoluntu nakwishishini ukuba awunaso isicwangciso esime kakuhle sokwenza imali kwiinzame zakho. Ndiyithandile xa usithi "Imidiya yokuncokola sisixhobo sokukhulisa umsindo", ndivumelana ngokupheleleyo noko!
Ke ingcebiso yam yile, cwangcisa iqhinga lakho kwimidiya yoluntu, wakhe ubudlelwane obomeleleyo kunye nokwandisa amaqondo akho okuguqula!